Location Tracking တကယ်လုပ်လို့ရလား ? ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ ? — Anycall Mobile
By RKhar M Thant February 25, 20213Mins Read
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီရက်တွေထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Location Tracking နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ခပ်လန့်လန့်ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။ တချို့ကလည်း ကိစ္စက လူတွေကို လန့်အောင် ခြောက်ထားတာ တကယ်ကိုယ့် Location ကိုလိုက်လို့မရဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့် Location လိုက်လို့ရမရ၊ ကိုယ့် Location ကိုလိုက်လို့မရအောင် ဘယ်လိုရှောင်ကြမလဲ ဆိုတာကို နည်းနည်းလောက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Location ကို တကယ် ခြေရာခံလို့ရလား ?
ဆိုတော့ ခုနကတုန်းက ကိစ္စကို ပြန်ဆက်ကြရအောင် ! ကိုယ့် Location ကို တကယ် ခြေရာခံလို့ရလား ? ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုလင်းမူကို ခေါ်သွားတုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ စာရွက်ထဲကလိုတော့ Lattitude Longitude အတိအကျ ထွက်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တကယ်ပါ။
ဒါဆို ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကိုယ့် Location ကိုထောက်လှမ်းနိုင်လဲ ?
ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ Track လုပ်နိုင်လဲ ဆိုတော့ လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က ဘယ် Network တိုင်တွေနဲ့ချိတ်နေလဲဆိုတာ ရှာပြီး လိုက်တဲ့နည်း (Cell Tower Triangulation), IMEI နဲ့ လိုက်တဲ့နည်း တွေနဲ့ လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းတွေက ခုနကပြောသလို Latitude Longitude အတိအကျမထွက်ပါဘူး။ အတိအကျထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကနေ နှစ်ပတ်လောက် အထိ အချိန်ယူပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရပါတယ်။ ကိုယ်ထင်သလို ကိုယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ကောက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ Location အတိအကျ ပြန်ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီနည်းတွေကို သုံးပြီး လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သင်္ကာမကင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ Register လုပ်မထားတဲ့ SIM ကတ်ကိုသာ ပြောင်းသုံးထားလိုက်ပါ။
Location Tracking ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ ?
1. GPS (Location Services) ပိတ်ထားပါ။
Make sure your Location Service is off – Anycall Mobile
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တည်နေရာကို လိုက်နိုင်ဖို့ အဓိကအကျဆုံးနဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်က ဖုန်းရဲ့ GPS Services ပါ။ ကိုယ်က US မကလို့ ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ထိ VPN ကျော်ထားလည်း GPS ကို မပိတ်ထားဘူးဆိုရင် ကိုယ့် Location က အမှန်အတိုင်းပဲပြနေမှာပါ။ မယုံရင် US ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်တဲ့ နေရာကို VPN ကျော်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး Google Maps ထဲကို ဝင်ကြည့်ပါ။ ဘယ် US မှရောက်မနေဘဲ ကိုယ့် Location အမှန်ကို ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဓိကဖြစ်တဲ့ Location Services (GPS) ကို ပိတ်ထားပေးပါ။
2. မသိတဲ့သူတွေပို့လာတဲ့ Link တွေထဲ လျှောက်မဝင်ပါနဲ့။
Internet ပေါ်က Link လေးဝင်လိုက်တာပဲ။ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ Link ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့် Location တွေရအောင်၊ ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို Malicious Infection တွေဝင်လာအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုတော့ မပြတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီး မသိတဲ့ Link တွေနှိပ်ခါနီးရင် စဉ်းစားပါ။ ကိုယ့် အသိတစ်ယောက်က ပို့လာသည်ဖြစ်စေ Newsfeed မှာတွေ့လို့ဖြစ်စေ တွေ့မိတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားလို့ ဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် နည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ အသိတစ်ယောက်ကို ပြကြည့်ပြီးမှ ဝင်ပါ။ အဲ့လိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ဖုန်းက Location Services ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာ သေချာနေပါစေ။ အကောင်းဆုံးကတော့ Facebook App ကို Location Permission ပေးထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
3. ဒေသတွင်း App တွေကို သတိထားသုံးပါ။
ကိစ္စတစုံတရာရှိတဲ့အခါ နိုင်ငံတွင်း Software House တွေဆီကနေပြီး Location Data အပါအဝင် User Data ကိုတောင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတွင်းက Develop လုပ်ထားတဲ့ App တွေသုံးမယ်ဆိုရင် သတိထားပေးပါ။ Settings > App ထဲက Location Permission ကိုပိတ်ထားပါ။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ Facebook တို့ Twitter တို့လို နိုင်ငံခြား အခြေစိုက် App တွေကဆီကနေတော့ တောင်းမရပါဘူး။ (ဥပမာ အနေနဲ့ Settings > Apps ထဲကနေ Facebook ကို Location Permission Off ပြထားပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Deny ဆိုတဲ့ Option ကိုနှိပ်ပေးရုံပါပဲ)
4. Apps တွေကို ယုံကြည်ရတဲ့ Sources တွေကနေပဲ ဒေါင်းပါ။
Play Store – Photo Internet
Apps တွေက ပုံမှန်အမြင်မှာသာ Facebook တို့ Google တို့ App တွေဖြစ်နေပေမယ့် နောက်မှာ Backdoor တွေ Bind ထားလို့ရပါတယ်။ အဲ့လို Backdoor တွေပါတဲ့ App တွေကိုသွင်းထားမိပြီး Permission လည်း အပြည့်ပေးထားမိပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ App တွေကနေ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို Control လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Location Data ဆိုတာ အနည်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းက Screen တချက်မလင်းပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Camera ကနေ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ယူတာတို့၊ ကိုယ့် Screen ကို ကိုယ်မသိအောင်လှမ်းပြီး Screenshot ရိုက်ယူတာတို့၊ ကိုယ့်ဖုန်းထဲက Data တွေကို စိတ်ကြိုက်ချယ်လှယ်လို့ရသွားတာတို့ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Apps တွေကို Playstore လို App Store လိုမျိုး ယုံကြည်ရတဲ့ Source တွေကနေသာဒေါင်းပါ။
5. VPN တွေသုံးပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချရပါစေ။
VPN တွေက Facebook တို့ Twitter တို့လို Government ကပိတ်ထားတဲ့ website တွေကို ဝင်ကြည့်လို့ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ Internet ကိုလည်း Encrypt လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုကာလကြီးအတွင်းမှာတော့ VPN ကိုသုံးကြဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Source ကဒေါင်းထားတဲ့ စိတ်ချရတဲ့ VPN တော့ဖြစ်ပါစေ။ ဒီနှစ်ချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Source ကဒေါင်းထားတာမဟုတ်ရင် ခုနက အချက်ကို သတိထားပါ။ စိတ်ချရတဲ့ VPN ဆိုတာက အခုလက်ရှိ နာမည်ရပြီးသား VPN တွေကိုပြောတာပါ။ Nord VPN, Express VPN တို့လို Paid VPN တွေက စလို့ 1.1.1.1 VPN တို့ Turbo VPN တို့ စတဲ့ Free VPN တွေအထိ ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့ VPN App တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီ App တွေကလည်း ကိုယ့်ကို Encrypt လုပ်ထားပေးသယောင်ဟန်ဆောင်ပြီး ကိုယ့် Data တွေကို ကြားဖြတ်ယူခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် VPN တွေကိုသုံးပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ VPN တွေတော့ဖြစ်ပါစေ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိတဲ့အတွက် မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက် မလုပ်ကြပါနဲ့လို့။ တခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့ မထင်မိတဲ့အချက်တွေကနေပဲ ကျွန်တော်တို့ကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ အခု Location Tracking ကိစ္စမှာလည်း ဖုန်းရဲ့ Location Services (GPS) Function က အဓိက အခရာကျပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ Location Permission ပေးထားရတဲ့ App တွေဆိုရင်လည်း သတိထားပြီးသုံးကြပါ။ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိုက်တဲ့နည်းတွေက မလွယ်ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း သူတို့ဘက်က အရေးကြီးတဲ့လူလို့ထင်ရင် လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ကိုယ်က ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ရှောင်ရှားကြပါလို့ပြောရင်း အားလုံးပဲ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ။
Be Safe, Be Strong !
Author RKhar M Thant
I'masimply human being who wanna writes contents, copies, code and tech articles.